Chinhu Chinonhuwa muMadrid: Iyo UNWTO Sarudzo Fiasco Inoenderera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Chinhu Chinonhuwa muMadrid: Iyo UNWTO Sarudzo Fiasco Inoenderera
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
UNWTO irikuvhara chikumbiro chaWalter Mzembi chezvinhu zvine chekuita nesarudzo zvisina kufanira kuna Secretary-General kuti zviunzwe kuGeneral Assembly izere mwedzi unouya kuChengdu, China?
Zvinotaridza kuti inogona kunge iri nyaya isingafadzi.
Mumazuva achangopfuura, UNWTO yakaratidza kusatendeseka kuronga kuisa zvirongwa zveZimbabwe kuExecutive Council, panzvimbo peGeneral Assembly.
Iyo fiasco inoenderera. Executive Council yeUNWTO, inoita kunge ine mhosva yekuita zvisina kufanira musarudzo, iri kubvunzwa kuti iongorore nekumhan'ara kana paine zvisina kufanira zvine chekuita nemumiriri weGeorgia, Zurib Polokashvili, achisarudzwa neKanzuru seMunyori Mukuru anosarudzwa.
Kunyangwe vachikurudzira vatungamiriri venyika dzekushanya kubva kutsigira Zimbabwe Walter Zembi chikumbiro chekuti General Assembly iongorore uye igadzirise zvirongwa, UNWTO iri kuenderera mberi nekuzvidzisa sangano iri. Kubuda pachena, kusvinura uye kuedza kwechokwadi kuongorora zviitiko zvakanyorwa zvekusazvibata kwakakosha kune ramangwana reUNWTO yedu. Izvi hazvifanire kutenderedzwa pamusoro pevanhu vanogona kuve nechido chakapihwa chekuviga zvakashata musarudzo. Izvi zvinotanga nesarudzo yekuti voisa zvinhu zveMzembi ajenda kuGeneral Assembly.
Zvinhu zveMzembi ajenda zvachose zvinofanirwa kuiswa kuGeneral Assembly, zvakawandisa zviri panjodzi yekuvanza kusazvibata kwesarudzo. Zvakwana zvemisangano yemukamuri yekumashure, madhiri, maoko akavanzika.
Nekupenya mwenje pane sarudzo-zvisirizvo zviitwa, iyo UNWTO ichave ichitora danho rakakosha kumberi kugadzirisa izvo zvave mumwedzi yapfuura, mukurumbira wakashatiswa.
Kusarudzwa kwaPololikashvili kunoda zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenhengo dzese dziri nhengo dzinopinda musangano weSeptember General Assembly kuvhotera mumiriri weGeorgia asati agamuchirwa kutungamira UNWTO yedu. Iyi haisi mhedziso yakagara yaitika. Ichi hachifanirwe kuitwa chibvumirano. Nekuwana zvinhu zveMzembi ajenda izvo zvinonyatsotsanangura zvisina kufanira musarudzo zvine chekuita nekusarudzwa kwePololikashvili, mushandirapamwe uye kusarudzwa kunotevera kuna Secretary General Elect, General Assembly inogona chete kuvhota zvine hungwaru. Zvinhu zveMzembi ajenda hazvifanire kudzingwa kana kupihwa mukana. Zvinhu zveMzembi ajenda zvinofanirwa kupihwa kunhengo dzese dzinovhota kuitira kusarudzwa kwekunyepedzera kwe Zurab Pololikashvili, akasarudzwa anogona kugadziriswa muChengdu, China neGeneral Assembly.
Iyi ndiyo yepamusoro positi yekushanya. Zvichida hazvishamise, danho resarudzo ratiratidza kuti hatina kusakanganiswa nekusazvibata pamatanho epamusoro ezvakange zvichizivikanwa pasi rose sesangano risingapindike nekuvimbika nekukudzwa. Iyi ndiyo UNWTO yedu, isu tinotarisira zvirinani, isu tinoda zvirinani, isu tinokodzera zvirinani.